रेखा थापा र सबिन श्रेष्ठको ‘हिरो रिटर्न्स’ हल भन्दा अगाडि नै यसरी हेर्नुस् टेलिभिजनमा – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/रेखा थापा र सबिन श्रेष्ठको ‘हिरो रिटर्न्स’ हल भन्दा अगाडि नै यसरी हेर्नुस् टेलिभिजनमा
अभिनेत्री रेखा थापा र अभिनेता सविन श्रेष्ठ अभिनीत चलचित्र ‘हिरो रिटर्न्स’ हलभन्दा अगाडि टिभीमा रिलिज हुने भएको छ । आशिष भेटवालको निर्देशन रहेको यो चलचित्र यही जेठ ३० गतेबाट डिस होममा प्रदर्शन हुँदैछ । निर्माता धुव्र न्यौपानेले लकडाउन खुलेर स्थिति सामान्य भएपछि चलचित्रलाई हलमा प्रदर्शन गर्ने तयारी पनि गरेको बताए । यो चलचित्र गएको बैशाख अन्तिममा रिलिज हुँदै थियो ।
निर्माता न्यौपानेले लकडाउन खुलेको ६ महिनासम्म हलमा दर्शक आउने अवस्था नरहने भएकाले पहिला टिभीमा चलचित्र रिलिज गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘चलचित्र निर्माण भएको चार वर्ष भइसक्यो । धेरै पटक हलमा चलचित्र प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेता पनि सफल भएन । कोरोनाका कारण अझै ६ महिना हलमा चलचित्र प्रदर्शन गर्ने अवस्था नहुने देखेपछि पहिला टिभीमा रिलिज गर्न लागेका हौं ।’
टिभीमा चलचित्र रिलिज गरेपछि हलको व्यापारमा असर गर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा निर्माता न्यौपानेले निराश भावमा भने, ‘असर त गर्छ । तर, कहिलेसम्म तयार भैसकेको चलचित्र थन्काएर राख्ने ? अब जे होला त्यही टर्ला ।’ हलमा नलाग्दै टिभीमा रिलिज हुन लागेको यो पहिलो चलचित्र भने होइन । लकडाउनकै समयमा चलचित्र ‘कोपिला’ पनि सिधै डिस होममा रिलिज भएको थियो ।
‘धुर्व तारा फिल्मस्’ र ‘सोम ओम फिल्मस्’ को संयुक्त व्यानरमा निर्माण भएको ‘हिरो रिटर्न्स’ मा भिम न्यौपाने र धुव्र न्यौपानेले लगानी रहेको छ । शिवम अधिकारीले लेखेको चलचित्रमा कास्यप घिमिरेको छायांकन तथा मित्र डि गुरुङको सम्पादन रहेको छ । चलचित्रमा दीपक शर्मा र टंक बुढाथोकीको संगीत, कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी तथा चन्द्र पन्तको द्वन्द्व निर्देशन रहेको छ ।
साउनमा हरियो पहिरनमा आकर्षक देखिइन् करिश्मा मानन्धर (फोटो सहित)